Ny Delta Air Lines dia manasa mpikambana miaramila mavitrika hiditra aloha
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Delta Air Lines dia manasa mpikambana miaramila mavitrika hiditra aloha
Rehefa mandeha mamaky ny seranam-piara-manidina ianao ary vao manomboka miditra ny masoivohon'ny Delta dia hohenoinao ny hoe:
Ny fanohanana ny miaramila sy ny mpihetsiketsika mavitrika dia lakilen'ny tetikady fandraharahana sy ny ezaka ataon'ny Delta. Izany no antony, mahomby eo noho eo, ny fiaramanidina dia manatsara ny fizotran'izy ireo hanomezam-boninahitra ireo mpiasan'ny miaramila mavitrika sy tsy manao fanamiana.
Ny hevitra nahatonga ity fanovana ity dia avy amin'ny mpikambana miaramila mavitrika iray izay nandefa taratasy tany amin'ny CEO Delta Ed Bastian nanontany raha toa ka mieritreritra ny hahafantatra ireo olona manao baiko ireo ny zotram-piaramanidina.
"Ny famoahana hevitra tena tsara amin'ny fiainana haingana dia nanjary fototry ny fahafahantsika manome traikefa ho an'ny mpanjifa tsy manam-paharoa", hoy i Gareth Joyce, SVP - Serivisy ho an'ny seranam-piaramanidina. "Manana tantara mirehareha amin'ny fanohanana ny tafika ny vahoaka Delta ary nitsambikina izy ireo hanatanteraka izany."
Taorian'ny 20 andro monja nanandramana tanteraka ilay hevitra, dia natoky ireo ekipa Delta fa mety hisy rollout malalaka hiseho vetivety. Ary ny valin-kafatra avy amin'ny mpiasa sy ny mpanjifa dia nanohy nanaporofo fa ity hetsika ity no tokony hatao.
Ity fanovana ity dia mitranga satria ny Delta dia manohy mampiasa vola amin'ny fitaovana sy ny haitao hanatsarana ny traikefan'ny mpanjifa ary hitondra fandaminana bebe kokoa amin'ny fizotry ny fitaterana.
"Ny vondrom-piarahamonina mitam-piadiana dia ampahany lehibe amin'ny zavatra ataontsika ao amin'ny Delta," hoy i Jim Graham, VP - Flight Operations, veteranin'ny tafika an-dranomasina amerikana ary mpanohana mpanatanteraka ny vondrona mpiasan'ny veterana an'ny Delta. "Ity dia fomba iray hafa hanehoan'ny Delta fankasitrahana an'ireo izay mahafoy zavatra betsaka ho antsika."
Mpiasa ao amin'ny Delta manodidina ny 3,000 no mpikambana ao amin'ny tafika amerikana ary miaramila 10,000 XNUMX eo ho eo no miasa ao amin'ny Delta. Ny mpiasa ao amin'ny Delta dia afaka manao asa an-tsitrapo amin'ny maha-Honor Guard azy, vondrona iray manatrika sidina ho avy ary manome fanajana an'ireo izay nanao sorona farany ho an'ny fireneny.
Delta dia manome fotoana ho an'ny mpanjifa hanohana ny tafika amin'ny alàlan'ny fanomezana kilaometatra maro amin'ny SkyWish ho an'ny Fisher House Foundation Hero Miles sy Luke's Wings, manome fitsangantsanganana an'habakabaka amin'ireo mpikambana amin'ny serivisy naratra, naratra na naratra, niaraka tamin'ny fianakaviany. Ny mpikambana ao amin'ny Delta sy SkyMiles dia nanome mihoatra ny 212 tapitrisa kilaometatra ho an'ireo fikambanana ireo. Delta koa dia manohana ny Kongresy Medaly of Honor Foundation, Marine Toys for Tots, Serving Our Troops, USO ary ny tafiky ny seranam-piaramanidina, ao anatin'izany ny Freedom Center ao Detroit ary ny Ivotoerana Serivisy Miaramila Minnesota.